मेरो निर्णयले पार्टी र नेताहरू सतर्क भएका छन् - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
सरकार होस् या पार्टी विधि मिचे चुप बस्दिनँ
२०३६ सालदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेका चन्द्रबहादुर शाही विद्यार्थी राजनीति हुँदै ४० सालमा पार्टीमा पूर्णकालिन सदस्य भएका थिए । ४२ सालमा पक्राउ परेका उनले एक वर्ष जेल जीवन बिताए । उनले आइएल पनि भद्रगोल जेलबाटै गरे । शिक्षक संगठनको जिम्मेवारी लिएर जिल्ला फर्किए । ४६ सालमा माले स्थापना गरेर निरन्तर लागिरहेका छन् । १५ वर्षसम्म एमालेको जिल्ला कमिटी सचिव चलाए । पार्टी अध्यक्षात्मक प्रणालीमा गएपछि उनी पाँच वर्ष जिल्ला अध्यक्ष भए । उनी पार्टीको बैकल्पिक केन्द्रीय कमिटीको सदस्य समेत भए । अहिले उनी केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको सदस्य छन् । ५६ सालमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएका शाही अहिले प्रदेश सभाको सदस्य छन् । ३६ सालदेखि निरन्तर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागिरहेका शाहीले प्रदेश सरकार गठनको विषयमा असहमति जनाउँदै राजीनामा नै दिए । तर पार्टीको अनुरोधमा उनी राजीनामा फिर्ता लिएर काममा खटिएका छन् । शाहीसँग नेपालपाटी डटकमले गरेको कुराकानी ।
जनताले तपाईलाई जिताए तर तपाईले राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभयो किन ?
मन्त्री हुनका लागि, सांसद हुनका लागि म कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेको होइन् । यो मुलुकलाई समाजवाद हुँदै साम्यवाद ल्याउनुपर्छ भनेर म लागेको हुँ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, सांसद, मन्त्री बनेको बाटोमा भेटिएका फलहरू मात्रै हुन् । कम्युनिष्ट पार्टी विधिले चल्नुपर्छ, नियमले चल्नुपर्छ, पद्धति र प्रक्रियाबाट चल्नुपर्छ । मुलुक त्यसरी नै चलाउनुपर्छ । त्यो सोचका साथ म कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेको हुँ । तर, अहिले एमालेभित्र विधि मिचेर पद प्रतिष्ठाको लागि मान्छेलाई दुलाबाट हुल्ने काम गरियो । मुगुका जनताले मलाई प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा अत्याधिक बहुमतले विजयी गराएर पठाए । प्रदेश नं. ६ (कर्णाली) मा हाम्रो भागमा सभामुख परेको थियो । मुख्यमन्त्री माओवादीलाई परेको थियो । म भन्दा सिनियर दुई जना नेताहरू हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूलाई सभामुख हुनुहोस् भन्दा मान्नु भएन । कमरेड यामलाल कँडेलले म संसदीय दलको नेता हुन्छु भन्नु भयो । कमरेड प्रकाश ज्वालाले म पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरेर जान्छु भन्नु भयो । त्यसपछि मैले ‘मेरो योग्यता छ, क्षमता छ । मलाई सभामुखमा पठाउनुहोस’ भनेर कुरा गरेँ । नेताहरूले हुन्छ भन्नु भयो । सपथ ग्रहण भन्दा दुई घण्टा अगाडि केन्द्र र प्रदेशका नेताहरूले तपाई सभामुखमा जानु हुँदैन । सधैँ क्रियाशील मान्छे सभामुख बन्दा संगठनलाई घाटा लाग्छ । सभामुख निस्कृय भएर बस्ने पद हो, संगठनलाई घाटा लाग्ने काम गर्नु हुँदैन । राम्रो मन्त्रालय लिएर सरकारमै जानुपर्छ भन्नुभयो । पार्टीको हितको लागि भनेर म सभामुखबाट ब्याक भएँ । मुख्यमन्त्री बनाइयो । पहिला गुलावजंग शाहको नेतृत्वमा म सहित अरु चार जना सरकारमा जाने कुरा भयो । ड्रेस लगाएर आउन भनियो । हामी लुगा लगाउन गइराखेको बेला एक्कासी तपाईहरूलाई भएन, अर्कैको नेतृत्वमा पठाउन ुपर्ने भयो भन्ने खवर आयो । त्यसपछि पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल, प्रदेश नं. ६ का पार्टी संयोजक युवराज ज्ञवाली र प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल लगायतका नेताहरूसँग विधि के हो भनेर सोधेँ–सिनियर–जुनियर हो कि ? विषय विशेषज्ञ हो कि ? समावेशिता हो कि ? भूगोल मिलाउनु पर्ने हो कि के हो ? भनेर विधि खोजेँ । यस्तै हो भन्ने ढंगले आलटालको कुरा ल्याए । यसरी पार्टी चल्न सक्दैन, मुलुक चलाउन पनि सकिदैन । विधिका साथ अघि नबढ्ने हो भने मुलुक संचालन पनि त्यसरी नै गर्न खोज्दा म जे सपना बोकेर पार्टीमा लागेँ । समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने जुन सपना नेपाली जनताले देखेका छन्, त्यो पूर्ति हुन सक्दैन । त्यसकारण अन्याय, बदमासीलाई लुकाएर बस्नुभन्दा यो विषय उठाउनुपर्छ भन्ने ठानेर प्रदेश सभा सदस्य तथा पार्टीको सदस्यबाट पनि राजीनामा दिएँ ।
विधि मिचेर कस्ता व्यक्ति मन्त्री बने त ?
न सिनियर हुन् न त विषय विशेषज्ञ नै । एउटा ठेकेदारलाई मन्त्री बनाइएको छ । अर्को एनजिओकर्मीलाई मन्त्री बनाइएको छ । अनि हिजो मैले नै राप्रपाबाट एमाले भित्र्याएकोलाई मन्त्री बनाइएको छ । नेपाली जनता एमालेलाई अझ बढी माया गर्थे । एकपछि अर्कोगरी मुलुक एमालेमय बन्थ्यो । यो या त्यो गुट भनेर सोझा, इमान्दार कार्यकर्तालाई शिकार बनाइएको छ । जो कार्यकर्ता जनताको घरदैलोमा घुमिरहेका छन्, जनताप्रति लोकप्रिय छन, तिनीहरूलाई बाइपास गरेर गुटगत हिसावमा म तेरै मान्छे हुँ भनेर नेताको घर धाउनेहरूलाई मात्रै पद प्रतिष्ठा दिने अनि तिनैलाई मात्र कार्यकर्ताको रुपमा लिने अवस्था छ । मैले नदेखेको कुरा गर्न सक्दिनँ । सिनियर कार्यकर्ता हुँदा हुँदै किन विधि मिचेर काम गरियो । यसको पछाडि पक्कै चलखेल हुन सक्छन् ।
माथिल्लो निकायमा कारण त माग्नुभयो होला नि ?
महासचिव ईश्वर पोखरेल, प्रदेश नंं ६ का संयोजक युवराज ज्ञवाली, प्रदेश संसदीय दलको नेता यामलाल कँडेल लगायतका नेताहरूलाई सोधेँ । सरकार गठन गर्दा विधि मिचियो, यसको कारण के हो भनेर सोधेँ । माथिका नेताले तलकालाई भने, तलकाले माथिकालाई भने । दोष लगाउने काम मात्रै गरे । खासै यस कारणले भनेर भनेनन् । त्यसपछि मैले राजीनामा दिए ।
पार्टीले निर्णय सच्याएको छैन् तर तपाईँ त राजीनामा फिर्ता लिएर काममा फर्कनुभयो नि ?
यो म माथि मात्रै अन्याय होइन । मनपरी तरिकाबाट पार्टी चल्यो, विधि, विधानको ख्याल गरिएन । भोलि मुलुक पनि यसरी चलाउँदा हामी मात्रै होइन, सिंगो मुलुक नै बर्वादीमा जान सक्छ भन्ने निचोडका साथ मैले कुरा उठाएको हुँ । मैले गल्ती गरेको भए कारण सहित कारवाही गर्नुपर्छ, होइन् भने बदमासी सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो माग थियो । मेरो विषयमा स्थायी समितिमा व्यापक छलफल भयो । स्थायी समितिले नै प्रदेश नं. ६ को सरकार गठन गर्दा विधि प्रयोग नगरी कमजोरी भयो । यो कमजोरीलाई हामी पुनः दोहो¥याउँदैनौँ । तपाई काममा फर्कनुपर्छ भनेर चिठी दियो । पार्टीको अनुरोधमा मुगाली जनताको मतको सम्मान गर्दै काममा फर्किएको हुँ ।
अव पार्टी विधि, विधानमा चल्छ त ?
सरकार होस्, या पार्टी विधि मिचेर चलाउन र चल्न खोजियो भने सदन र सडकबाट पनि आवाज उठाउँछु । बाल्यकालदेखि नै संघर्ष गरेर यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ । पार्टीले विधि मिचेर सरकारमा सदस्यहरू पठायो । मैले विरोध गरेँ । त्यो कुराले गर्दा केन्द्र सतर्क भएर विषय विशेषज्ञ, सिनियर–जुनियर, सक्रियता हेरेर जान लागिरहेको छ । मेरो एउटा आवाजले गर्दा सवै पार्टी र नेताहरू सतर्क भएको अवस्था छ ।
तपाईले विधिको कुरा गरिरहँदा तपाईको प्रदेशमा नियम नबनी सांसदहरूले एक–एक लाख पेश्की लिएको विषय पनि आयो नि ?
कर्णाली प्रदेशको बैठकमा म उपस्थित भइनँ । प्रदेशका अगुवा नेता र संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई एक–एक लाख पेश्की दिने निर्णय भएको रहेछ । मलाई पनि पेश्की लिन भनिएको थियो । म विधि अनुसार चल्ने मान्छे भएकाले त्यो लिन मानिन् । प्रदेश सभाले प्रदेश सभाका सदस्यहरूको सेवा सुविधाको लागि कानुन नबनाइ कुनै पनि सेवा सुविधा लिन मिल्दैन । नीतिगत र विधिगत रुपमा नभएकोले त्यो रकम लिन मिल्दैन भनेर हिडेको व्यक्तिलाई नै केही संचार माध्यमले राजीनामा दिएर हिडेको सांसदले पेश्की रकम लियो भनेर समाचार बनाएछन्। संचार जगतलाई सत्य तथ्य बुझेर मात्र समाचार प्रकाशित÷प्रशारित गर्न आग्रह गर्छु । प्रदेश संसद सचिवालयमा बुझेर समाचार लेख्दा राम्रो हुन्थ्यो । विधिका लागि जनताको मतद्धारा आर्जित पद नै राजीनामा दिएर हिड्न सक्ने मान्छे फेरि विधि मिचेर भएको काममा सहभागी हुने कुरै आउदैन् । अफवाह फैलाउने मिडियाप्रति कानुनी सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नेछु । विधि मिचेर गरिने कुनै पनि कामको विपक्षमा उभिन्छु ।
मुगाली जनता र कर्णाली प्रदेशमा तपाईको योगदान के रहन्छ ?
हिजो पनि सांसद भएको हुँ । अहिले पनि जनतामाझ नै छु । कर्णाली प्रदेशमा अभावै अभावका पहाडहरू छन् । ती प्रदेशका जनताले ठूलो सपना देखेका छन् । अभाव, बेरोजगारी, अशिक्षाका पहाड छन् । त्यो पहाड थिचोल्दै मैले भ्याएसम्म मलाई मत दिने मुगाली जनता र समग्र कर्णालीको विकासका लागि अनबरत रुपमा लागिरहनेछु ।